Global ဝယ်ရမလား? China ဝယ်ရမလား? — Anycall Mobile
By Nyein Aung Htet November 10, 20192Mins Read
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ China အလုံး နဲ့ Global အလုံး ဆိုပြီး နှစ်ခု ကွဲပြားနေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ လူတော်တော်များများ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်တော်တို့ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
(***တကယ်လို့ မဖတ်ရှု့ရသေးဘူးဆိုရင် http://bit.ly/2K8jdNR အဲ့ဒီ လင့်ကလေးကို နှိပ်လို့ သွားရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်***)
China နဲ့ Global နှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို သိသွားပြန်တော့ နောက်ထပ် မေးစရာတွေ ရှိလာပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Xiaomi နဲ့ Redmi ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်…
Global ဝယ်ရမလား? China ဝယ်ရမလား? ဘယ်ဟာဝယ်သင့်လဲ? ဆိုတာပါပဲ။
China နဲ့ Global နှစ်ခုလို့ဆိုလိုက်ရင် သူတို့ နှစ်ခုကြားက ဈေးနှုန်းကွာဟမှုကို အရင်ဆုံး ပြေးမြင်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အရင်ဆုံး ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
Global အလုံးဟာ Xiaomi/Redmi ကနေ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ (Authorized Reseller) တွေဆီကနေ တဆင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာပါတယ်။
China အလုံးတွေကို (Parallel Import) PI အလုံး လို့လည်း ခေါ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ Gray အလုံးတွေလို့လည်း ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ Xiaomi/Redmi ကနေ တရားဝင် အသိအမှတ်မပြုထားတဲ့ တခြား (Third-party Reseller) တွေဆီကနေ တဆင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာပုံခြင်း မတူညီတဲ့ အတွက် သူတို့ နှစ်ခုကြားမှာ ဈေးနှုန်းကွာဟမှုတွေ ရှိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ China အလုံးတွေဟာ ဈေးသက်သာပေမယ့် Global အလုံးတွေလို Google Apps တွေ တစ်ခါတည်း ပါဝင်မနေတာမျိုး နဲ့ ၊ Xiaomi/Redmi ရဲ့ Official 1 Year Warrenty အာမခံ မပါရှိ တာမျိုးတွေကတော့ China အလုံးတွေရဲ့ အားနည်းချက်ဆိုတာထက် ရေရှည်စိတ်ချရမှုမှာ နည်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
နောက်ထပ် မြင်သာအောင် ဥပမာ ပေးရရင်တော့ China အလုံးတွေဟာ မသေချာတဲ့ နှစ်လုံးထီထိုးသလိုမျိုးဖြစ်ပြီး Global အလုံးတွေကတော့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ စုကြေးငွေ စု သလိုမျိုးပေါ့။
ဘယ်လို အခြေအနေမှာ China အလုံး ဝယ်သင့်သလဲ…?
အိပ်ကပ်သိပ်မဖောင်းရင်၊ Google Apps တွေ ထပ်ထည့်ပြီးသုံးရမှာကို အဆင်ပြေရင်၊ Official Warrenty အာမခံ မပါဘဲ ဆိုင်ရဲ့ Services လေးနဲ့ သုံးရမှာ အဆင်ပြေရင်၊… အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဆိုရင်တော့ China အလုံး ဝယ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေမှာ Global အလုံး ဝယ်သင့်သလဲ…?
ဖုန်းဝယ်ပြီးနောက် ဘာဆိုဘာမှ ဦးနှောက်မစားချင်ရင်၊ နည်းနည်းလေးမှ အလုပ်မရှုပ်ချင်ရင်၊ Official 1 Year Warrenty အာမခံ နဲ့ ဖုန်းကို စိတ်အေးလက်အေး စိတ်ချလက်ချ သုံးချင်ရင်၊ Google Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေသုံးချင်ရင်၊ … အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဆိုရင်တော့ Global အလုံး ဝယ်သင့်ပါတယ်။
China နဲ့ Global နှစ်ခုလုံးက အသုံးပြုသူရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အခြေအနေပေါ်ကိုလိုက်ပြီး သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Global ကတော့ ဈေးအနည်းငယ်ပိုပြီး ဘယ်လို အသုံးပြုသူအတွက်မဆို ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
Global အလုံး ဝယ်ရမလား?
China အလုံး ဝယ်ရမလား? ဝေခွဲရခက်နေတုန်းပဲလား…?
ကျွန်တော်တို့ Anycall Mobile ရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ အရောင်းဝန်ထမ်းတွေက
အဆင်သင့် စောင့်ကြိုလျှက်ပါပဲ ခင်ဗျာ…။
#Anycall_Mobile #Xiaomi #Redmi